A Kpọkuola Ndị Uwe Ojii Ka Ha Nwụchikọọ Ndị
Akpọkuola ma dụọ ndị ọrụ uwe ojii na steeti Anambra ka ha mee ngwa ngwa mee nnyocha ma nwụchikọọ ndị omekome ahụ tọọrọ onye ọcha na-arụ ọrụ n'ụzọ ahụ siri Otuọcha gaba Ibaji.
Ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ kpọrọ oku a n'ọgbakọ ọnụnọ ha nwere ụbọchị Tuzdee n'isi ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ dị n'Awka.
Nke a bụ okwu ịtụnye ọnụ nke a tụpụtara site n'ọnụ onye ndu otu ndị kacha n'ọnụ ọgụgụ ma bụrụkwa onye nnọchi anya ọgbọ nta nkwado Anambra West n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ, ma bụrụkwa nke o sitere na ya gosipụta mgbakasị ahụ o nwere na na-agbanyeghị ihe dị iche iche ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ mepụtagoro n'ọnọdụ nchekwa na steeti ahụ, na ọtụtụ ndị mmadụ ka fooro ntutu ha taa, sị na ha agaghị esepụ aka n'ibute ala adịghị mma, ime mpụ na arụrụ ala ndị ọzọ.
O kwuru na ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ emeela iwu sị na ntaramahụhụ dịịrị onye ọbụla tọrọ mmadụ na steeti ahụ bụ ọnwụ na ịkụkpọsị ụlọ onye ahụ, ma bụrụkwa nke a na-emezu n'uju.
Maazị Okoye, bụkwa onye ọ kacha mara na onye selitere isi n'ọrụ nchewka, katọkwara otu ahụ onyeisi ndị ọrụ uwe ojii n'ala anyị siri nye iwu ka a nasịsịa onye ọbụla, ma ndị ọrụ nchekwa ime ime obodo egbe ha ji arụ ọrụ, ma sị na ndị ọrụ nchekwa kaara ịgba mbọ nke ọma iji gbochie ajọ ọnọdụ ahụ, ma e wezuga ntụziaka ahụ e nyere.
Ka ha tụnyechara ọnụ na ya bụ okwu ntọ na-asọ ntị oyi, ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ jizịkwara otu olu wee nye onyeisi ndṅ uwe ojii na steeti ahụ ntụzi aka ka o were ọsọ were ije nwụchikọọ ndị ọjọọ ahụ ma were iwu nyụchaa ha anya.
Ha kwara arịrị na ya bụ ajọ ọnọdụ emeela ka ọrụ ngo ahụ ka gbaberegodi n'otu akụkụ ugbu a, ebe udu mmiri na-akpụdobe nso n'ike n'ike.
N'akụkụ nke ya, onye nnọchi anya ọgnọ nta nkwàdo Njikọka nke abụọ n'ụlọ omebe iwu ahụ bụ dọkịnta Pete Ibida katọrọ ntọrọ ahụ a tọọrọ nwa amadi ahụ hapụrụ ala nna ya bịa ịrụ ọrụ ngo na steeti ahụ, kwuo na nke ahụ dị ntị njọ, ma kpọkuziekwa ọchịchị steeti ahụ na ndị ọrụ nchekwa ka ha mee ihe ngwa ngwa banyere ha bụ ọnọdụ.
Ndị ọzọ kwuru okwu n'ịkwado atụmatụ na nkwekọrịta ahụ gụnyere maazị Kingsley Iruba, bụ onye nnọchi anya ọgbọ nta nkwado Nnewi South nke mbụ, ogbo ya nke Anambra East, bụ maazị Obinna Emeneka.
Na mmechi ịtụle nke ahụ, ọka okwu ụlọ omebe iwu ahụ, bụ oriakụ Rita Madụagwụ gụpụtara ya bụ atụmatụ, ebe e mezịkwara ntụli aka site n'olu iji mara nkwekọrịta ndị ụlọ ọgbakọ ahụ banyere nke ahụ, bụkwa nke ọka n'ọnụ ọgụ n'ime ha nyere nkwàdo olu.